China Flanged Ball Check Valve orinasa sy mpamatsy |Dongsheng
3. Mifanatrika araka ny DIN3202 F6, ANSI 125/150
4. Flange araka ny EN1092-2, PN16/25.ANSI 125/150 sns.
Ball Check Valve -Ball check valve dia karazana valva fanaraha-maso miaraka amin'ny multi-ball, multi-channel, multi-cone inverted firafitry ny fikorianan'ny, indrindra indrindra ahitana ny anoloana sy aoriana valva vatana, fingotra baolina, cones, sns.
Ny valva fanaraha-maso ny baolina dia mampiasa baolina mihodinkodina misy fingotra ho toy ny disc valve.Eo ambanin'ny hetsiky ny medium, dia afaka mihodinkodina miakatra sy midina eo amin'ny slide integral amin'ny vatan'ny valva izy mba hanokafana na hanidy ny valva, miaraka amin'ny famehezana tsara sy ny fampihenana ny tabataba.
NYFlanged Ball Check ValveNy vatana dia mampiasa fantsona fikorianan'ny rano feno, miaraka amin'ny fikorianan'ny rano be sy ny fanoherana ambany, manome fahafaha-mamehy miavaka amin'ny tsindry ambany.Izy io dia azo ampiasaina amin'ny rano mangatsiaka, tambajotra fantsom-pamokarana indostrialy sy an-trano, ary mety kokoa amin'ny paompy rano maloto.Azo apetraka eo amin'ny fivoahan'ny paompy rano izy io mba hisorohana ny fikorianan'ny lamosina sy ny tantanana rano tsy hanimba ny paompy.
Vatana sy satroka vita amin'ny vy / ductile, vatana misy epoxy, seza NBR / EPDM ary baolina aluminium mifono NBR / EPDM (8″ hatramin'ny 16″ NBR / EPDM mifono baolina vy).
Misy habe: 1 1/2″ hatramin'ny 16″.
Naoty tsindry: PN16/10 naoty (1 1/2″ hatramin'ny 8″) ary PN10 (10″ hatramin'ny 16″).
Vatana vy Cast/Ductile
Habe 1 1/2 ″ hatramin'ny 16 ″
2 Baolina Metal + NBR/EPDM
4 Bolt Inôksa
teo aloha: Valve fanaraha-maso ny karazana Wafer lehibe
Manaraka: Valve fanaraha-maso baolina misy kofehy